तपाईको अनुहारमा दाग छ ? अव चिन्ता नगर्नुस् ~ FMS News Info
तपाईको अनुहारमा दाग छ ? अव चिन्ता नगर्नुस्
काठमाडौं । खास गरी टिन एजका युवा युवतीमा अनुहारमा अनावश्यक गन्डीफोर आउने, काला दागहरु बस्ने समस्याले सताउने गरेको छ भने उमेर बढ्दै जाँदा छाला चाउरिने र अनुहारभरी दाग बस्ने समस्या प्रौढहरुमा देखिने गरेको छ ।
तपाईं पनि अनुहर कुरुप भयो भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता छाड्नुहोस् र अनुहारको दाग हटाउने उपाय गर्नुहोस् । यसकालागि तपाईंले ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्दैन ।
अनुहारका दाग हटाउन मानिसले के के गर्दैन होला ? डन्डिफोर एउटा आएपछि हुरुरु आउन थाल्छ र एउटा विसो हुन कम्तीमा हप्ता दिन लाग्छ भने गहिरो दागहरु बसिरहेका हुन्छन् ।
यस्ता दागले टिनएजर्सहरुमा निराशा छाउने गर्दछ । यो उमेरमा युवा युवतीमा केहि परिवर्तन देखिन्छन् । यो उमेरमा रित, आवेग र चन्नलता बढी हुने हुँदा शरीरमा तेलीय पदार्थको उत्पादन धेरै हुने र यस्तो पदार्थले अनुहारमा दागहरु आउने गर्दछ ।
छालाका छिद्रहरु टालीदा अनुहारमा डन्डीफोर झनै बढी आउने भएकाले तपाईंले सवैभन्दा पहिले सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्दछ । तर, अनुहार धुँदा धेरै रगेट्ने काम भने नगर्नुस् ।
हलुका तरीकाबाट अनुहारको सफाई गर्नुहोस । कपालमा तेल लगाउनुभएको छ भने अनुहारसम्म आउन नदिनुहोस् । तेतका कारण डन्डीफोर थप मौलाउने भएकाले कपाललाई रवरले बाँधेर राख्नुहोस ।
अनुहारमा बेला बेलामा हात लाने बानी छोड्नुहोस । हातको ब्याक्टेरियाले अनुहारमा भएको डन्डीफोरमा थप संक्रमण फैलाएर दाग बढाउँछ । अनुहास धुँदा सफा र हल्का तौलियाको मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।
धेरै पटक प्रयोग गरिएको तौलीयामा ब्याक्टेरीयाहरु हुन सक्छन् । पानीको बाफले अनुहार सफा गर्ने र सुख्खा राख्ने खालको क्रिम प्रयोग गर्नुस् । जथाभावि औषधिको प्रयोग नगर्नुस् । यती गर्नुभयो भने डन्डीफोरको संक्रमण हुने छैन । र तपाईंको अनुहार सफा र सुन्दर हुने छ ।
www.nepalsandesh.com भिडियो तल छ